Wallkpụrụ Mgbidi 3D
Kedu ihe bụ ...
Dị ka anyị niile maara, marble bụ ...
Uru nke mar ...
Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ...
Marble na ndụ
Ojiji nke ihe ndi ozo ...
Xiamen Morningstar Nkume Co ...
Kedu ihe dị iche na mabul okike na marble wuruwuru?
Dị ka anyị niile maara, marble bụ ezigbo ọkwa ngwaahịa.So ọtụtụ ezinụlọ na-eji mabul chọọ ha mma, ma mabul nwere marble na faux marble. Ha dịkarịsịrị. Ma ma ọ bụ marble artificial ma ọ bụ marble okike nwere uru na ọghọm ya. Okwu Mmalite Artificial marble i ...
Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ iji mgbochi tebụl n'ihi ọdịdị ya mara mma na ọtụtụ atụmatụ ndị mara mma. Nke mbụ, ịdị elu dị elu Ọ dịghị mfe deformation.Ndị e bu pụta ụwa bụ ịgafe ọtụtụ afọ iji wee kee ya. Na mmịnye gbasaa ...
Ojiji nke ihe oghere bu ihe ohuru na eweputa ohuru, ihe di iche iche eji ewu ulo abiawo nke oma. Amasị nke mabụbeghị ebelata kemgbe oge ochie. Marble nke oke ikuku na-achọ mma, dị ka ọrụ nkà nke ihe okike na-aghọ, nwere ike ịgwakọta na wh ...
site ha na 19-09-24
Xiamen Morningstar Stone Co., LTD hiwere na November 23, 2017 ma debanye aha na Xiamen, obodo mara mma nke mara mma, nke na-etinye aka na ụdị ọ bụla nke marble, granite, ogidi ndị pụrụ iche, wdg. .